SomaliaReport: Luuq oo Lagaga Banaanbaxay Al Shabaab
Boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaalada Luuq ayaa isugu soo baxay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo xayiraadda ay xagjireyaasha diimeed ku soo rogeen gaadiidka ganacsiga, arintaas oo keentay in qiimaha maciishaddu sare u kacdo.
Luuq oo ka tirsan gobolka Gedo ee xuduudda ku dhaw, ayaa waxaa dhawaan la wareegay xoogagga dawladda ku meel gaadhka ah, balse ciidamada Al-Shabaab ayaa amar xayiraad ah ku soo rogay baabuurta ganacsiga ee magaalada soo galaysa iyaga oo miinooyin ku aasay waddooyinka. Miinooyinkan oo dilay gaadhi dameer iyo ninkii iska lahaa ayaa ka hor istaagay ganacsatada inay badeecooyinkooda soo galiyaan magaalada.
Banaanbaxyadan oo ay isla soo qabanqaabiyeen dawladda ku meel gaadhka ah iyo duqayda magaalada ayaa waxaa meesha lagaga dhawaaqayey hal-kudhegyo ka dhan ah xoogagga Al-Shabaab, waxaana ka mid ahaa “ Dooni mayno malayshiyada waalan ee arxanka daran iyo jooji miinaynta dhulka”.
Shacabka deegaanka ayaa sidoo kale aad uga cadhaysnaa xayiraadda ay Al-Shabaab ku soo rogtay hay’adaha caalamiga ah ee gargaarka u fidinayey dadka xilli ay abaaro ba’ani saameeyeen dalka.
“Xayiraadda baabuurta ganacsiga ee soo gali jirtay kana bixi jirtay magaalada ayaa hoos u dhac weyn ku keentay meheraddii ganacsi, taas oo saamayn xajmi wayn ku keentay nolosha in ka badan kumanaan qof oo ku nool gobolka”, C/laahi Ibraahim (Kuredow) oo ku hadlayey magaca dawladda ku meel gaadhka ah ayaa sidaa ku yidhi dadkii isu soo baxay. “Haddaysan xoogagga Al-Shabaab joojin waxa ay wadaan, waxaan qaadan doonaa hub aan kula dagaalano illaa aan ka dabargoyno dhamaantood”, Oday ka mid ah duqayda magaalada ayaa sidaa meesha ka yidhi. Ilaa iyo markii ay bilaabatay joojinta gaadiidka ganacsi, qiimaha badeecooyinka muhiimka ah oo dhan ayaa circa isku wada shareeray waxaana ku yimid sicir barar.,
Lixdii bilood ee u danbeeysey, 50-ka kg ee sokorta ahi wuxuu ka kacay 45$ wuxuuna gaadhay 55$, halka 50-ka kg ee bariiska ahna 40$ ilaa 50$ uu gaadhay, sidoo kale 50-ka kg ee burka ahi wuxuu noqday 22$ ilaa 33$. Shidaalka ayaa isagu 200 ee litir ka kacay qiimihiisuna iska baddalay 200$ ilaa 300$.